Uniqueprox - Page3of 303 - Daily News Info
” ထမင်းစားပြီးနောက် မလုပ်သင့်သည့် အန္တရာယ် (၈)ရပ်”
သင်ဒါတွေ သိပါသလား။ ဖတ်ရှုပြီး လိုက်နာဆင်ခြင်ပါ။ မိမိကိုယ်တိုင်ရော၊မိသားစု နှင့် သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေများအားလုံးကို လည်း လက်ဆင့်ကမ်းမျှဝေပေးလိုက်ပါ …. နော်။ (၁) ဆေးလိပ်မသောက်ပါနှင့်။ ထမင်းစားပြီးနောက် စီးကရက် ၁-လိပ်သောက်ခြင်းသည် သာမန်အချိန် စီးကရက် ၁၀-လိပ်သောက်ခြင်းနှင့် ညီမျှပြီး၊ ကင်ဆာ ရောဂါဖြစ်နိုင်ချေအလားအလာပိုများကြောင်း ဆေးသိပ္ပံပညာရှင်များက သတိပေးထားသည်။ (၂) […]
အလကားစားရတုန်းကစားခဲ့ပြီး တရားဝင်လက်ထပ်ခိုင်းမှ… See More
အလကားစားရတုန်းကစားခဲ့ပြီး တရားဝင်လက်ထပ်ခိုင်းမှ… See More ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း)လားရှိုးမြို့နယ် တာပုံ ကျေးရွာ အုပ်စုရှိ မတ်ချီးနုကျေးရွာ အနီးကားလမ်းဘေးချုံပုတ်အတွင်း ပုတ်ပွသေဆုံးနေ သော အမျိုးသမီး ( ၂ ) ဦးအားသတ်ခဲ့ပြီးအလောင်း ဖျောက်ဖျက်ခဲ့သူအား လားရှိုးမြို့မှ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ ၏ကြိုးစား ဖော်ထုတ်မှုအရ ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီဖြစ်ပြီး တရားခံမှာလည်း ၎င်း […]
ကရင်ပြည်နယ် ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီမှ ​ရှေ့တန်းရောက်တပ်မတော်သားများအတွက် စားသောက်ဘွယ်ရာများ သွားရောက်လှူဒါန်း မေ ၇၊ ဘားအံ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီဌာနချုပ်မှ ​ရှေ့တန်းရောက်တပ်မတော်သားများအတွက် စားသောက်ဘွယ်ရာများ ကေးပို့လှူဒါန်းပွဲအခမ်းအနားကို ယနေ့ နံနက် ၉ နာရီအချိန်တွင် ကရင်ပြည်နယ်၊ ကော့ကရိတ့်မြို့နယ်၊ အမှတ် (၁၂) စစ်ဆင်ရေးကွပ်ကဲမှုဌာနချုပ်၌ ကျင်းပရာ အရှေ့တောင်တိုင်း စစ်ဌာနချုပ် ဒုတိယတိုင်းမှူး […]
မန္တလေးကျုံးရှော့ဒုံးတွေရှိသူမှာ ဈေးဝယ်ပြန် စသုံးလုံး ဗိုလ်ကြီးဖြစ်နေ
မန္တလေးမြို့၊ကျုံးအရှေ့ဘက်ခြမ်း၊၆၆လမ်းပေါ်တွင် မဖောက်ခွဲရသေးသောရှော့တိုက်ဒုံးနှစ်လက် တွေ့ရှိ မန္တလေးမြို့၊အောင်မြေသာစံမြို့နယ်၊ဒေါနဘွားရပ်ကွက်၊ကျုံးအရှေ့ဘက်ဘက်ခြမ်း၊၆၆လမ်းနှင့်၁၅လမ်းဒေါင့် မဖောက်ခွဲရသေးသော ရှော့တိုက်ဒုံးနှစ်လုံးကို မေလ၇ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းက ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ရကြောင်း လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့အသိုင်းအဝိုင်းမှ သိရသည်။ “ကျုံးအရှေ့ဘက်ခြမ်း၊၆၆လမ်းပေါ်မှာ ရှော့တိုက်ဒုံးနှစ်လုံးထောင်ထားတာကို စစစက အရာရှိတစ်ယောက်ဈေးကပြန်လာရင်း တွေ့ခဲ့တာကြောင့် သက်ဆိုင်ကိုအကြောင်းကြားတဲ့အတွက် ရှာဖွေရှင်းလင်းတွေ လုပ်ခဲ့ရပါတယ်´´ဟုတာဝန်ရှိသူတစ်ဦးကပြောသည်။ အဆိုပါရှော့တိုက်ဒုံးနှစ်လုံးအား အများပြည်သူထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုမရှိစေရေးအတွက် လမ်းပိတ်ဆို့ကာ စစ်မြေပြင်အင်ဂျင်နီယာတပ်ဖွဲ့ဝင် သက်မဲ့ပြုလုပ်၍ရှင်းလင်းသိမ်းဆည်းသွားခဲ့ကြောင်းလည်း သိရသည်။ မႏၲေလးၿမိဳ႕၊က်ဳံးအေရွ႕ဘက္ျခမ္း၊၆၆လမ္းေပၚတြင္ […]
အေအေစစ်ဦးစီးချုပ်ရဲ့ တွစ်တာမှာ ပြောဆိုမှုအပေါ် ဇော်မင်းထွန်းရဲ့တုန့်ပြန်ချက်
အေအေစစ်ဦးစီးချုပ်ရဲ့ တွစ်တာမှာ ပြောဆိုမှုအပေါ် စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရ တုံ့ပြန်ပြောဆိုချက် ရက္ခိုင့်တပ်တော် AA စစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်က အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ်ထင်လတ်ဦး အမည်ကို တပ်ပြီး လူမှုကွန်ရက် တွစ်တာမှာ စိန်ခေါ် လိုက်ပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်က တွစ်တာမှာ အနောက်ပိုင်းတိုင်း တိုင်းမှူးကို နာမည်တပ်ပြီး သူ့ရဲ့လုပ်ရပ်တွေကြောင့် အာရုံနောက်နေရကြောင်း၊ သူနေတဲ့နေရာထိ […]
ဂျာမန်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌတွေက CRPH ဟာ တခုတည်းသော တရားဝင်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တယ်လို့ဆို CRPH နဲ့အတူ ခိုင်ခိုင်မာမာဆက်လက်ရပ်တည်လျက်ရှိ
ဂျာမန်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌတွေက CRPH ဟာ တခုတည်းသော တရားဝင်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တယ်လို့ဆို CRPH နဲ့အတူ ခိုင်ခိုင်မာမာဆက်လက်ရပ်တည်လျက်ရှိ မေ ၆ ဂျာမန်အထက်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့ အောက်လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌတွေက CRPH ဟာ တခုတည်းသော တရားဝင်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ကြောင်းနဲ့ CRPH နှင့်အတူ ခိုင်ခိုင်မာမာဆက်လက်ရပ်တည်လျက်ရှိတယ်လို့ ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ ဂျာမန် အထက်လွှတ်တာ် ဥက္ကဋ္ဌ Sgd. […]